မယုံကြည်ခြင်း - နိူးထမှုကိုဆီးတားသောအရာတစ်ခု | Unbelief - A Hindrance to Revival | Real Conversion
မယုံကြည်ခြင်း - နိူးထမှုကိုဆီးတားသောအရာတစ်ခု
( နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ- ၁၁ )
UNBELIEF- A HINDRANCE TO REVIVAL
အောက်တိုဘာလ ( ၁၂ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“သိုးစုနွားစုပါလျက်၊ ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းငှါ သွားကြသော်လည်းမတွေ့ရ ကြ။ သူတို့နှုင့်ကွာတော်မူပြီ။” (ဟောရှေ ၅း ၆ )
ဣသရေလသည် အာရှုရိတို့ထံမှကြုံတွေ့ရသောဘေးအန္တရယ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက်ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ပြေစေရန် ယဇ်ပူဇော်ဖို့ သိုးနှင့်နွားများစွာကိုဆောင်ယူလာခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်ထံမှလာသော သနားခြင်းကိုရရှိကြခြင်းမရှိပေ။ သူတို့၏ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်အပြစ်များကြောင့် “ဘုရားသ ခင်သည် သူတို့ထမှ မိမိကိုယ်ကို ကွာစေတော်မူသည်။” သူတို့သည် တေြ႔နိူင္သည် ကာလတွင် ဘုရားသခင်ကို မရှာခဲ့ကြပေ။ အခု အရမ်းနောက်ကျသွားပြီ။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏မျက် မှောက်တော်ကို သူတို့ထံမှ ကွာစေတော်မူသည်။
“သိုးစုနွားစုပါလျက်၊ ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းငှါ သွားကြသော်လည်းမတွေ့ရကြ။
သူတို့နှုင့်ကွာတော်မူပြီ။” (ဟောရှေ ၅း ၆ )
ကျွန်ုပ်သည် ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးညတွင် ဘီလ်ဂရေဟမ်၏ ဗွီဒီယိုခွေကိုကြည့်ခဲ့သည်ဖြစ် ၍ ထိုကျမ်းပိုဒ်အကြောင်းကို စဉ်းစားနေမိသည်။ သူသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်ခန့်တွင် ကယ်လ်ဖိုးနီး ယားပြည်နယ်၊ ဆက်ခရာမင်တိုတွင် တရားဟောတော်မူခဲ့သည်။ သူ၏တရားဒေသနာခေါင်း စဉ်မှာ “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူတရားဟောနေစဉ်တွင် “သူတို့နှုင့်ကွာ စေတော်မူပြီ” ဟူသောစကားလုံးအကြောင်းကို စဉ်းစားခဲ့မိသည်။
ကျွန်ုပ်က ဘီလ်ဂရေဟမ်ကို သဘောကျနှစ်သက်သည်ကို သင်သဘောပေါက်နား လည်လိမ့်မည်။ အမြဲတမ်းကြိုက်တယ်၊ အမြဲတမ်းကြိုက်နေအုံးမည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၆၃ခုနှစ်၌ လော့ဒ်အိန်ဂျယ်လ်ကော်လီဆီမြူတွင် သူ၏တရားဟောချက်ကို သွားရောက်နားထောင်သည် ကို သတိရမိသည်။ ကားရပ်ထားသည့်နေရာတွင် ကားကိုရပ်ပြီး ကားထဲမှထွက်လာသောအခါ လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ လေထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို “ခံစား” ခဲ့နိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကော်လီဆီမြူထဲသို့ဝင်သွားသောအခါ ကျက်သီးများထလာခဲ့သည်။ ခံစားမှုတစ်ခုလုံးက လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တည်နေမှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ဟောခန်းတွင်ရှိ သောသူတိုင်းတိတ်ဆိတ်နေကြသည်။ အပ်တစ်ချောင်းကျသည်ကိုပင် ကြီးမားသည့် သီချင်းသံ ကြီးကဲ့သို့ကြားရနိူင်ပါသည်။ မစ္စတာဂရေဟမ်၏တရားဟောချက်မှာ ယနေ့ခေတ်ကျွန်ုပ်ကြားဖူး သမျှတွင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် မတူညီသောမြို့များတွင်ပြုလုပ်သည့် ဘီလီဂရေဟမ်၏ခရူးဆိတ်ခြောက် ခုကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဥက္ကာလင်းတွင် ၁၉၇ဝအစော ပိုင်းကာလတွင်ပြုလုပ်သည့် ခရူးဆိတ်သို့သွားသည့်အချိန်တွင် သူ၏တရားဟောကြားမှုတွင် တန်ခိုးမရှိခဲ့ပေ။ ထို့နောက် ၁၉၈ဝအစောပိုင်းတွင် မစ္စတာဂရေဟမ်ကို ကျွန်ုပ်၏သင်းအုပ်ဆရာ Dr. Timothy Lin နှင့်အတူ တီဗွီပေါ်တွင် ကြည့်ခဲ့ရသည်။ ဆွေးနွေးမှု၏ထက်ဝက်ခန့်တွင် ဒေါက်တာလင်း က “သူ၌တန်ခိုးမရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ မစ္စတာဂရေဟမ်အ သက်ကြီးလာသောကြောင့်ဖြစ်မည်ဟု မထင်ပါ။ သူသည် တက်ကြွမှုရှိနေသေးသည်။ သို့ရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းမှုရှိနေသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်လိုအပ် နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကတော့ “ သူ့ကိုယ်သူ သူတို့နှင့်ကွာစေတော်မူသည်” ဟု ထင်မိပါသည်။ (ဟောရှေ ၅း ၆ ) မစ္စတာ ဂရေဟမ်ဟောကြားခဲ့သည့် အချိန်ကကဲ့သို့မ ဟုတ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အနောက်နိူင်ငံ၌ ကြားဖူးသမျှတရားဟောချက်တိုင်းတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လိုအပ်နေသည်ဟုခံစားရပါသည်။ ထိုအရာက ကျွန်ုပ်နှလုံးသားကို နာမကျန်းဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တရားဟောသည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အ သင်းတော်များမှ လုံးဝထွက်ခွါသွားသည်ဟု ကျွန်ုပ်ခံစားမိပါသည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းလှ ပါတကား။ ထိုအကြောင်းအရာကို စဉ်းစားမိတိုင်းမျက်ရည်စီးကျလာသည်။ Dr. Lloyd-Jones က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါဘဲ တရားဟောနိူင်သည်။ ဤစကားလုံးများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြနိူင်သည်။ သို့သော် ထိုအရာမှာ လုံလောက်မှုမရှိ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် တန်ခိုးတော်၏ဖော်ပြချက်ကို လိုအပ်ပေသည်” ဟုဆိုပါသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, ၁၉၈၇၊ စာ -၁၈၅) အိုး… ထိုတန်ခိုးကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မည်သို့လိုအပ်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာအတွက် ဆုတောင်းပေးပါ။
၁၈၅၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများကြားတွင် နိူးထမှုမရှိကြောင်းကို သင်တို့သိရှိပေမည်။ ထိုအရာမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ထက်မက ဖြစ်ပေသည်။ ၁၈၅၉ခုနှစ်မတိုင်မှီ တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များသည် ဆယ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်စီ ဘုရားသခင်စေလွှတ်သော နိူးထမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် Dr. Martyn Lloyd-Jones က ဤသို့ဆိုသည်။
၁၈၅၉ခုနှစ်မှစတင်၍ အဓိကနိူးထမှုကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပွါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသီးမသီးသည့်အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရသည်။ လူတို့သည် ဘုရားသ ခင်အားယုံကြည်သည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးကြပြီး၊ ဥာဏ်ပညာ၊ အတွေးအခေါ်နှင့် သင်ယူမှုများဆီသို့လှည်ထွက်သွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းတော်သမိုင်း တွင်ကြာရှည်သောအသီးမသီးသည့်အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် သဲကန္တာရတွင်ရှိနေကြဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာမှရုန်း ထွက်နိူင်ကြပြီဟုဆိုသောသူတို့ကို အယုံအကြည်မရှိပါနှင့်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, ၎င်း၊ စာ-၁၂၉ )
ဤသည်မှာ သင်တို့အား တရုတ်ပြည်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောနိူးထမှုကြီးကို ဗွီဒီယိုခွေ အားဖြင့် ကျွန်ုပ်ပြသရသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေတည်း။ The Cross-Jesus in China (China Soul for Christ Foundation, မှာယူရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။) နိူးထမှုကြီးသည် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဖြစ်နိူင်ချေရှိကြောင်း ယခုအချိန်တွင် အချို့ဒေသများတွင်ဖြစ် ပျက်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် အနောက်တိုင်းနိူင်ငံတွင် နိူးထမှုမရှိသည်ဖြစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရန် တစ်ခုတစ်လေလေးမျှ ကျွန်ုပ်မပြသနိူင်ပါ။ တရုတ်နိူင်ငံတွင် လွန်ခဲ့ သောနှစ်များစွာကဖြစ်ပျက်ခဲ့သော နိူးထမှုဗွီဒီယိုခွေကိုသာကျွန်ုပ်ပြသနိူင်ပါသည်။ တရုတ်ပြည် တွင်ဖြစ်ပျက်သောနိူးထမှုခွေကို သင်ကြည့်ရှုရလျှင် နိူးထမှုကို တောင့်တနေမည်ဟု ကျွန်ုပ် မျှော်လင့်မိပါသည်။ ရှောလမုန်မင်းကြီးက ဤသို့ဆိုထားသည်။
“ဝေးသောပြည်မှရောက်လာသောဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းသည် ရေငတ် သောသူ၌ ချမ်းဧသောရေကဲ့သို့ဖြစ်၏။” (သုတ္တံ ၂၅း ၂၅ )
ယနေ့ခေတ်တွင် နိူးထမှု၌ ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာကို သင့်အားအခု မြင်စေချင်သည်။ Brian H. Edwards က
နိူးထမှုသည် ရောဂါကဲ့သို့ ကူးစက်သောအရာမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ဆာငတ် တောင့်တသောသူတို့အလယ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေလျက်ရှိကြောင်းကို တွေ့ရပေ သည်။ နိူးထမှုတွင် ဘုရားသခင်အသုံးပြုတော်မူသောသူတို့အများသည် အတိတ်ကာလတွင် ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာကို သတိပြုရန်မိမိကိုမိမိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့အတွက် ဘုရာသခင်လုပ်ဆောင်နိူင် သောအရာကို တုန်ပြန်နိူင်ရန် အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောနိူးထမှုမှ သင်ယူမှုကို ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်နိူင်ခဲ့ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်စိကို ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာပေါ်တွင်ထားရမည်။ စိတ်နှလုံးကို ချဲ့ထွင်ပြီး ရူပါရုံကိုလည်း ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာပေါ်တွင် ထားရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဘုရားသခင်သည် အတိတ်ကသူလုပ်ဆောင်ခဲ့ သောအရာကို တုန့်ပြန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား မျှော်လင့်နေပေမည်။ (Brian H. Edwards, Revival! A People Saturated with God, Evangelical Press, ၁၉၉၁၊ စာ ၉၂-၉၃ )
အတိတ်ကနိူးထမှုအကြောင်းနှင့် အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောနိူးထမှုအကြောင်းကို ကြားသိရခြင်းသည် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်တွင်လည်းလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ သည်ဟုသောယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ မယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြစ်မည့် နိူးထမှုကို ဆီးတားသောအရာကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုသည် မိမိဇာတ နာဇရက်မြို့သို့ပြန်ခဲ့သည်။ လူတို့သည် တရားဇရပ်၌ သူ၏ဟောပြောချက်ကို နားထောင်ကြသောအခါ “အံ့ဩခဲ့” ကြသည်။ သို့သော် သူသည် လက်သမား၏သားသာဖြစ်ပါသည် ဟုအချို့က ဆိုကြသည်။ အများကိုပြစ်များစေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “မြို့သားများတို့သည် မယုံကြည်ကြသောကြောင့်၊ ထိုအရပ်၌ များစွာသော တန်ခိုးကိုပြတော်မမူ” ဟုဆိုလေသည်။ ( မဿဲ ၁၃း ၅၈ ) Dr. John Gill က “ တန်ခိုးလိုအပ် သောကြောင့်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ် အောင်မြင်ကျော်လွှာရန် သူအတွက် သူတို့၏မယုံကြည်မှုများ သည် သာ၍တန်ခိုးကြီးသည်မဟုတ်၊ သူတို့သည် ထိုက်တန်မှုမရှိဟူသော စီရင်မှုကို ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, အတွဲ ၁၊ The Baptist Standard Bearer, ၁၉၈၉၊ စာ-၁၅၀၊ မဿဲ ၁၃း ၅၈ နှုင့်ပါတ်သက်သည့်မှတ်စု)
နိူးထမှုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသောလူတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့ရာတွင် သူက ကျွန်ုပ်သည် လက်ထပ်ပြီးခါစဖြစ်၍ ထိုအကြောင်းအရာများကို အလေးမထားခဲ့ပါဟုသာဆို သည်။ ဗာဂျီးနီးယားတွင် စစ်မှန်သောနိူးထမှုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့သည် အခြားတစ်ယောက်ကို လည်းကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့ရာတွင် သူကလည်း ထိုအရာမှာ “ရှည်ကြာသောဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခု” သာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ထိုသူတို့မှာ ဖြစ်ပျက်လာသောနိူးထမှုကို ချီးမွမ်းဩဘာမပေးနိူင်လောက်အောင် လောကဆန်သူများဟုသာဆိုချင်ပါသည်။ သူတို့သည် နိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်း ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသူများဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသ ခင်၏တန်ခိုးတော်၌ သာ၍ယုံကြည်မှုရှိလာအောင် ထိုဘုရားသခင်မစကူညီပါစေသော်။
တမန်တော်ပေါလုက “ဝိညာဉ်တော်အရှိန်ကိုမငြိမ်းစေကြနှင့်” ဟုဆိုထားသည်။ ( ၁ သက် ၅း ၁၉ ) မယုံကြည်ခြင်းနှင့်လောကဆန်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်အရှိန်ကိုငြိမ်းစေနိူင်သ သည်။ Dr. Lloyd-Jones က “ဝိညာဉ်အရှိန်ငြိမ်းစေခြင်း” နှင့် နိူးထမှုတွင် စိတ်ဝင်စားမှုဆုံးရှုံး ခြင်းကို ပြောဆိုခဲ့သည်။ (The Puritans, Banner of Truth, ၁၉၉၆၊ စာ-၉ )
တပည့်တော်များသည် မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် တန်ခိုးကြီးသောနတ်ကို မနှင်ထုတ်နိူင် ကြပေ။ (မဿဲ ၁၇း ၂၀ ) ဂျူးများသည် “သူတို့၏မယုံကြည်ခြင်းကြောင်”႔ ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်ခွင့်မရခဲ့ကြပေ။ ( ဟေဗြဲ ၃း ၁၉ ) နိူးထမှုကို မယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ကြောင့် “ငြိမ်းသတ်နိူင်” သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွါးစေရန် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင် မှုကိုပြညွှန်လျက် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးထားခဲ့သည်။ ဟေဗြဲအခန်းကြီး ၁၁ တစ်ခုလုံး သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာကိုပြောဆိုနေပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ် ကာလတွင် နိူးထမှုကိုမရရှိနိူင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းတရားမှာ မယုံကြည်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်နိူင်ပါသည်။ ၎င်းမှာ အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်နိူးထမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ် ပျက်သောနိူးထမှုအကြောင်းကြားသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် နတ်ဆိုးစွဲသောသူ၏ဖခင် နှင့်အတူ “သခင်၊ အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏၊ မယုံကြည်နိူင်သည်ကို ကူမတော်မူပါ”(မာကု ၉း ၂၄) ပြောဆိုနိူင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့နိူးထမှုကိုစေလွှတ်လိုသောအချိန်တွင် ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်းလောင်းရန် သင်ဆုတောင်းထားသည်ဖြစ်၍ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကို တိုးပွါးစေလိမ့်မည်။ သင်သည် နိူးထမှုအကြောင်းကြားသိသောအခါ အာရုံစူးစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်တွင် နိူးထမှုကိုစေလွှတ်ထားရန် ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပါ။ “သခင်၊ အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏၊ မယုံကြည်နိူင်သည်ကို ကူမတော်မူပါ” ဟူသောအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဆု တောင်းရန် အသင့်လျော်သောအရာဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။
သင်သိရှိထားရမည့်အခြားသောအရာတစ်ခုမှာ နိူးထမှုအများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့အ သင်းတော်ကဲ့သို့ ဒေသန္တာရအသင်းတော်များတွင်ဖြစ်ပျက်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်များက နိူးထမှုသည် ကြီးမားသောအရာ၊ သမိုင်းကိုပင်ပြောင်းပြန်လှန်စေသည်ဟု ရေးသားထားကြပါသည်။ ထိုစာရေးဆရာများသည် ကောင်းသောအရာများကို ယူဆကြသော် လည်း နိူးထမှုသည် မည်သို့စတင်အသုံးပြုလာသည်အကြောင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့အားမပြော ဘဲ ရောက်ရှိလာနိူင်သော အန္တရယ်ကိုမူ သတိချပ်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ဤအဖြစ်အ ပျက်အားလုံးကိုဖတ်ရှုကြပြီးသောအခါ သင်သည် မယုံကြည်ခြင်းများစွာဖြင့်ရောက်ရှိလာပေ မည်။ ထိုအရာကို စာတန်က “ကြီးမားသောအရာ ဤအရပ်တွင်မဖြစ်စဖူးပါ”ဟုဆိုနိူင်ရန် အခွင့် အရေးရရှိပေမည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးဆရာအချို့အား အသင်းတော်သည် ဝိညာဉ်တော်သွန်း လောင်းခြင်းကို ခံစားလာသည့်အချိန်တွင် မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်သည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပို၍ရေး သားစေလိုပါသည်။ Dr. Lloyd-Jones က ဤသည်နှင့်ပါတ်သက်၍ ဤသို့ဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုအစီအစဉ်အတွက် အချိန်အကြာကြီး ပြင်ဆင်ထားကြခြင်းမရှိပါ။ နိူးထမှုသည် ဒေသန္တာရအသင်းတော်ထက် အစည်းအဝေးကြီးနှင့် လှုပ်ရှားမှုကြီးများတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည်ဟူသော အတွေးအခေါ်သည် တိုးပွါးနေသဖြင့် နိူးထမှုသည် တဖြည်းဖြည်းလျှော့ နည်းလာပေမည်။ (Revival, ၎င်း၊ စာ-၆၁ )
တရုတ်ပြည်တွင်ဖြစ်ပျက်သောနိူးထမှုကိုကြာဗွီဒီယိုပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရ၍ အဘယ်သို့မျှ ခံစားရခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်အံ့ဩရပေမည်။ သူတို့က နိူးထမှုသည် ကြီးမားသည့်အရာ-တစ်နိူင် ငံလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာဖြစ်ကြောင်းပြသည်။ “ကြီးမားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပွါးခြင်း မရှိသေး” ဟုစာတန်က ပြောလျှင် အံ့ဩစရာပင်ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းဆိုရလျှင် ထိုအရာမှာ လုံးဝမှန်ကန်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်နိူင်ငံတွင် တနိူင်ငံလုံနိူးထမှုမရနိူင်ပ။ တနိူင်ငံလုံးနိူးထမှုအတွက် သင်ဆုမတောင်း၍မဟုတ်။ ဒေသန္တာရအသင်း တော်ကို အဓိက ထားကြည့်ရသည်။ ပရောဖက် ဇာခရိက “အမှုငယ်ပြုသောနေ့ကို အဘယ်သူသည် မထီမဲ့မြင် ပြုသနည်း။” (ဇာခရိ ၄း ၁၀ ) Dr. McGee က “ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှုငယ်ပြုသောနေ့ကို မထီမဲ့ မြင်ပြုတတ်ကြပါသည်။” ကျွန်ုပ်တို့အမေရိကန်လူမျိုးများသည် ကြီးမားသောအရာများ၏ဖိ အားကိုရင်ဆိုင်နေရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောင်မြင်မှုကို အဆောက်အဦးနှင့် လာရောက် သောလူများနှင့်သာတိုင်းတာကြပါသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၃၊ Thomas Nelson Publishers, ၁၉၈၃ဈ သည -၉၂၄၊ ဇာခရိ ၄း၁၀ နှင့်ပါတ်သက်သည့် မှတ်စု)
ဘုရားသခင်သည် ထိုနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းအားဖြင့်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်လေ့မရှိပါ သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အချိန်တွင် သင်ယူရမနည်း။ သူသည် နောဧသင်္ဘောထဲ တွင်ရှိသော လူရှစ်ယောက်အားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဟေဗြဲ အခန်းကြီး ၁၁တွင်လည်း ကြီးမားသည့် အစည်းအဝေးကြီးမရှိပါ၊ တစ်ဦးချင်းစီသာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဂိဒေါင်အား မိဒျန်လူမျိုးများကို အနိူင်ယူရန် လူပေါင်း ၃၀ဝသာလိုအပ်သည် ဖြစ်၍ လူများကိုပြန်စေလွှတ်ရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သမိုင်းထဲက နိူးထမှုသည် လူတို့၏လက် တစ်စုံအားဖြင့်ဖြစ်ပွါးသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ကြီးမားသည့် “နိူးထမှု” အစည်းအဝေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အ ချန်ကာလတွင် စစ်မှန်သောနိူးထမှုကိုမဖြစ်စေနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဘီရီဂရေဟမ်က ၎င်း၏ ဧဝံဂေလိခရူးဆိတ်က နိူးထမှုကိုမဖြစ်စေကြောင်း ဝန်ခံသောအရာကို ဖတ်မိသည်။ ဘီလီဂရေဟမ်က ခြောက်ညလောက်တရားဒေသနာဟောကြားသည့် ဒါလတွင်ပြုလုပ်သော လူပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ လူငယ်များတက်ရောက်သည့် ခရစ်တော်အတွက် ခရူးဆိတ် ၇၂ ကိုကြည့် ပါ။ မည်သည့်အကျိုးအမြတ်ထွက်ပေါ်လာသနည်း။ အကျုးိမရှိပါ။ နောက်တနှစ်တွင် ဘီလီဂရေဟမ်သည် ၁၉၇၃ ဇွန်လတွင်၊ ကိုးရိယားနိူင်ငံ ဆိုးမြို့တွင် လူပေါင်း တစ်သန်းကျော် အားတရားဟောခဲ့သည်။ ထိုခေတ်တွင် တရားဟောဆရာတစ်ပါးက ထိုများလောက်များသော အရေအတွက်အားတရားဟောသည်ဆိုသည်မှာ လွန်စွာပင်များပြားလှသည်။ သို့ရာတွင် အကျိုးမရှိခဲ့ပေ။ ဒါလနှင့်ဆိုးမြို့တွင် အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲသည်ဟု ကျွန်ုပ်ပြောနိူင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုအစည်းအဝေးပွဲများတွင် နိူးထမှုထွက်ပေါ်မလာနိူင်ပါ။
နိူးထမှုတိုင်းသည် အနည်းငယ်သောလူများအားဖြင့်သာစတင်သည်။ နော့သမ်တန်၊ မာဆာကျူးဆီခ်ရှိ Jonathan Edwards ၏အသင်းတော်တွင် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောသူများ၌ ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည့် ပထမဆုံးနိူးထမှုသည် လူပေါင်းတစ်ရာဝန်းကျင်ဖြင့်သာအစပြုခဲ့ပါ သည်။ ၁၇၃၈ခုနှစ် နှစ်သစ်အကြိုတွင် အော့စ်ဖော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ခုနှစ်ဦးနှင့် အခြားလူခြောက်ဆယ်ဦးတို့သည် လန်ဒန်ရှိအခန်းထဲတွင် ဆုတောင်စောင့်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကိုပြန့်နှံနေသောပထမဆုံးနိူးထမှုသည် ထိုနေရာတွင်အစပြုခဲ့သည်။ ၁၈၀၆ခုနှစ်တွင် ကောလိပ်ကျောင်းသားငါးဦးသည် ကောက်ရိုးပုံအောက်တွင်ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ကမ္ဘာ လုံးသာသနာပြုလှုပ်ရှားမှုသည် ထိုအချိန်တွင် နိူးထမှုနိူးထမှုကြီးများတွင်တစ်ခုဖြစ်သည့် အမေရိကန်တွင်အစပြုခဲ့သည်။ ၁၇၂၇ခုနှစ်တွင် လူပေါင်း ၄၀ဝခန့်သည် ယခုတွင် ချက်ပြည့်သူ့ သမ္မတနိူင်ငံအတွင်းရှိ Nicholas Von Zinzendorf တွင် ဆုတောင်းရန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ နိူးထမှုတစ်ခုသည် ကမ္ဘာအဆုံးသို့စေလွှတ်တော်မူသော သာသနာပြုများအားဖြင့်အစပြုခဲ့ သည်။ ထို မိုဗေးယာန်းဆုတောင်းအဖွဲ့အားဖြင့် ယောဟန်နှင့် ချားလ်ဝယ်စလီတို့ပြောင်းလဲလာ ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကြီးမားသည့် မက်သဒစ်နိူးထမှုနှင့် ကယ်တင်ခြင်းတပ်တို့သည် ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားနိူင်ငံရှိ ဤလူပေါင်း ၄၀၀၏ဆုတောင်းအစည်းအဝေး အားဖြင့်အစပြုခဲ့
ပါသည်။ ၁၈၅၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် နယူးယောက်စီးတီးရှိ ဖူတမ်လမ်းတွင် ရှိသည့် မြောက်ပိုင်းဒါခ်ျအသင်းတော်တွင် လူခြောက်ဦးက တစ်နာရီခန့်အတူတကွဆုတောင်း ပဌနာပြုကြသည်။ သူတို့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း နာရီတစ်ချက်စီအတူတကွဆုတောင်းရန် သ ဘောတူလက်ခံကြသည်။ တတိယနိူးထမှုသည်ပြန်လည်စတင်လာပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူ ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ နယူယောက်ရှိ ဖူတမ်လမ်းရှိနိူးထမှုသည် မိုင်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ဝေးကွာသည့် အင်္ဂလန်နိူင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိ C. H. Spurgeon အမှုတော်လုပ်ငန်းကို အစပြုမွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည် နိူးထမှုအကြောင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာဖတ်ရှုလာခဲ့ပါသည်။ ပထမနိူးထမှု နောက်ပိုင်းတွင် ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားချက်ဖြင့် စတင်သည့် နိူးထမှု တစ်ခုတောင်ကျွန်ုပ်မ မှတ်မိပါ။ တစ်ခုမျှမရှိပါ။ ပင်္တေကုတ္တိပွဲ၌ ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းသောအချိန်တွင် လူပေါင်း ၁၂၀ သည် အထက်ခန်းတွင် ဆုတောင်းနေကြကြောင်းကိုသတိရပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ထိုသေးငယ်သောအစည်းအဝေးမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ရောက်ရှိသွားနိူင်သည်ကို သတိရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟောကြားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည်ပျောက်သောသူများအား ခရစ်တော်သည် သူတို့၏အပြစ်များအတွက် ပေးဆပ်ရန်လက် ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူကြောင်းကို ပြောကြရသည်။ ယေရှုသည် သူတို့အား ထာဝရ အသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုလည်းပြောပါသည်။ သို့အချက်အ လက်များကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အသက်တာတွင် အမှန်တကယ်သိနား လည်စေရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူသည် သူတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူသည် သူတို့အား အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်များကို ဆေးကြောရန် ခရစ်တော်ထံသို့ဆောင်ယူရ မည်။ စစ်မှန်သောနိူးထမှုတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို သွန်းလောင်းရန် ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းကြရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်ဆုတောင်းသည့် အချိန်တွင် နိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ အပြစ်သားတို့၏စိတ်နှလုံးတွင် အလုပ်လုပ်ရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းအတွက်ဆုတောင်းပဌနာပြုပါ။ အို အဘဘုရားသခင်၊ ပျောက်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုနားလည်စေရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းပြီး သူတို့အား သားတော်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏။ ယေရှုနာမမြတ်၌ ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်…………။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “အကျွန်ုပ်ကိုမှုတ်သွင်းတော်မူပါ”
(Edwin Hatch ၁၈၃၅-၁၉၅၂ ရေးစပ်သည်ပြီး၊ B. B. McKinney, ၁၈၈၆-၁၉၅၂ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။)